प्रचण्ड एकाएक ब्याक, के थियो गाेप्य कुरा ? मिल्न लागेका हुन् ओली – प्रचण्ड p
प्रचण्ड एकाएक ब्याक, के थियो गाेप्य कुरा ? मिल्न लागेका हुन् ओली – प्रचण्ड
काठमाण्डौँ । सडमसम्म पुगेकाे नेकपा बि वाद झन जटल बन्दै गएकाे छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दिउँसो १ बजे सत्तारुढ नेपाल कम्यु´निस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक डा´किएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा आएनन् । ओलीको अनुपस्थितिमा ८ भाइ नेताहरुले २० मिनेटजति छलफल गरे । र, मंसिर २० सम्मका लागि बैठक स्थगन गरियो ।
बैठक सुरु हुनै लाग्दा कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले बाहिर निस्केर केहीबेर खासखुस गरे । त्यसपछि ईश्वर पोखरेललाई पनि बोलाइयो । खासखुस सकेर बैठक कक्षमा प्रवेश गरेपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, कमरेड केपी ओली बैठकमा आउनुभएन । बैठकमा उहाँको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै हुन्छ, उहाँविना बैठक गर्नु उचित हुँदैन, त्यसैले आजको बैठक स्थगित गरौं र २० गते अर्को बैठक गरौं ।’
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले यति भनिसक्दा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाए । ‘कमरेड केपी ओली बैठकमा आउनुपर्‍यो नि ? बिनाकारण बैठकमा नआउने ?’ वरिष्ठ नेता खनालले भने, कोही व्यक्ति नआउँदैमा बैठकै हुँदैन भन्न मिल्दैन ।’
अर्का नेता माधवकुमार नेपालले पनि बरु दुई दिन बैठक सार्न सकिन्छ, तर कोही नआउँदैमा बैठकै हुँदैन भन्न नमिल्ने भन्दै प्रचण्डको भनाइप्रति टिप्पणी गरे । प्रवक्ता नरायणकाजी श्रेष्ठले पनि केपी ओली नआउँदा बैठक हुँदैन भन्न नमिल्ने बताउँदै प्रचण्डको भनाइको आ लोचना गरे ।
सहभागी नेताका अनुसार अध्यक्ष ओली नआउँदैमा बैठक बस्न मिल्दैन भन्ने आशयको प्रचण्डको भनाइको खनाल, नेपाल र श्रेष्ठले खण्डन गरेपछि प्रचण्डले आफूलाई सच्याए । आफूले बैठकै हुँदैन भन्न खोजेको नभई गृहकार्यका लागि केही समय दिऔं र अध्यक्ष ओलीसमेतको सहभागितामा बैठक बसौं भन्न खोजेको प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिए । त्यसरी गृहकार्यका लागि समय लिने कुरा ठीकै हो भन्दै अन्ततः मंसिर २० गते सचिवालयको अर्को बैठक बस्ने सर्वसम्मति जुटेको एक नेताले बताए । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्ने बताउँदै आएका प्रचण्ड एकाएक किन ब्याक भए सर्वत्र चासोको बिषय बनेको छ ।